कोरोना भाइरस जैविक हतियार चिन आफैले बनाएको खुलासा, असावधानीकै कारण फैलियो यस्तो संकट! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > कोरोना भाइरस जैविक हतियार चिन आफैले बनाएको खुलासा, असावधानीकै कारण फैलियो यस्तो संकट!
admin February 2, 2020 February 2, 2020 अन्तराष्ट्रिय, स्वास्थ्य	0
माघ २९, काठमाडौं- छोटो समयमै विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको नो’बेल को’रोना भा’इरसबारेमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका चर्चा सुरू भएका छन् । चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको यो भा’इरसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी सं’कटकालको घो’षणा गरिसकेको छ । यो भाइ’रस पत्ता लागेको केहि हप्तामा चीनमा मात्र करिव ३ सय भन्दा बढीको ज्या’न लिइसकेको छ भने हजारौं सं’क्रमित भेटीएका छन् ।
केहि हप्तामै विश्व’भर आ’तंक मच्चा’एको यो भा’इरस ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रको पनि टाउको दु’खाई बनेको छ । विश्वभर भ’याबह अवस्था आउने लाग्दा अन्तराष्ट्र्रियस्तरकै केही विज्ञहरूले यसलाई जै’विक ह’तियार हुनसक्ने आ’शंका गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार नोबेल कोरोना भाइरस चीनको ‘सेक्रेट वायोलोजिकल वि’पन’ (गोप्य जैविक) हतियारको एक हिस्सा हुनसक्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ । केहि विज्ञहरूले भने यो भाइरस चीनको प्रयोगशालामा विकास गरिएको “वायोलोजिकल विपन” हुनसक्ने समेत आ’शंका गरेका छन् ।
चीनको पी फोर प्रयोगशालामा विकास गरिएको आशंका गरिएको यो भाइरस केहि चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको ला’पर्वाहीका कारण बाहिर आएर क्ष’ति पुर्‍याएको अनुमान ती विज्ञहरुको छ । इजरायलका एक वायोलोजिकल हतियार तथा यु’द्ध मामिलाका विज्ञले चीनले यस किसिमको ह’तियार बनाएको हुनसक्ने दा’वी गरेका छन्। तर प्रयोगशालामा असा’वधानीका कारण चीनको आफ्नै नागरिकमा फैलिएको आ’शंका पनि ती इजरायली विज्ञले गरेका छन्। कोरोना फैलिएपछि चीनका उपराष्ट्रपति चुपचाप वुहान शहरको भ्र’मणमा जानु र त्यसलाई लो प्रोफाइलमा राखिनुले पनि यस आशंकालाई बल मिलेको केहि अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। को’रोना फैलिएपछि वुहान शहर लगायत चीनका धेरै शहरमा यात्रामा प्र’तिवन्ध लगाइएको छ भने विभिन्न देशहरूले आफ्नो साव’धा’नी अपनाउन थालेका छन् । चीनमा रहेका विभिन्न देशका नागरिकको पनि उद्दार भैरहेको छ
यसअघि चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सम्पूर्ण सूचनाहरु नदिएको आ’रोप लागेको थियो। चीनले यसपटक भने आफूले सम्पूर्ण सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग साझा गर्ने तथा कुनै पनि सूचना न’लुकाउने प्रतिब’द्धता जनाएको छ। तर स्थित भनेजस्तो नभएको भन्दै केहिले सो प्र’तिबद्धतामाथि समेत आ’शंका गरेका छन्। संसारभर कोरोना भाइरसको बारेमा अ’नुसन्धान भैरहेको छ भने चीनले आफूले यसबिरु’द्ध लड्ने स्प्रे बनाएको र यसको परिक्षण भैरहेको जनाएको छ भने अष्ट्रेलियामा यसका वि’रुद्ध लड्ने एण्टी भाइरस बनाउने कुरामा केहि सफलता मिलेको अ’नुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन्।
कोरोना सं’क्रमणका कारण चीन अहिले निकै तनाव अनि चुनौतिवाट गुज्रिरहेको छ। एक साता नबित्दै दर्जनौं देशमा फैलिएको यो भाइरसले संसारभरको ध्यान खिचेको छ ।वुहान सहरबाट फैलिएको यो स’ङ्क्र’मणकै कारण वि’श्वभर फैलन सक्ने अनु’मान गरिएको छ। चीनले कोरोना भाइ’रसको बि’रुद्ध लड्नका लागि हरसंभव क’सरत गरिरहेको छ। ६ दिनमा नै १० हजार जनाको उपचार गर्न सक्ने गरि बनाउन आँटेको अस्पतालको पनि संसा’रभर च’र्चा भैरहेको छ । अनेकौँ प्रयास गरिरहेको चीनले यसको औसधि पनि बनाएको खबर प्राप्त भएको छ ।
चीनको निकै लोकप्रिय पत्रिका ‘पीपल्स डेली चाइना’का अनुसार चीनको सांघाई हेल्थ सेन्टरले कोरोना भाइरस बिरुद्ध लड्न सक्ने स्प्रेको आविस्कार गरेको छ । उक्त पत्रिकाका अनुसार यसको सफल परिक्षण पनि गरेको छ । यसको आधिकारीक ट्वीटर ह्याण्डलमा भर्खरै प्राप्त एउटा पोष्टमा यो जानकारी दिइएको छ । जसका अनुसार सांघाई हेल्थ सेन्टरले यसरी कोरोना भाइरसका बि’रुद्ध लड्नका लागि स्प्रेको बिकास गरि सफल परीक्षण समेत गरिसकेको छ।
यद्धपी यस्ता स्प्रेहरु अहिलेसम्म सामान्य जनताको प्रयोगार्थ उपलब्धता भनें छैन । यस्ता स्प्रे लाई मुखमा छर्केर कोरोना भाइरसको बि’रुद्ध आफूलाई सर्न नदिने क्षमता बिकास गर्न सकिन्छ ।यी स्प्रेहरु फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थकर्मीलाई प्रयोगार्थ बनाइएको बताइएको छ । हुन त सन् २००२ मा सार्स भाइरस आउटब्रेकका समयमा चीनले कुनै प्रकारको यस्ता पद्धति अहिले १७ वर्ष सम्म पनि नबनाएको भनी आलोचना गर्नेहरु पनि पीपल्ड डेली चीनको ट्वीटको कमेन्टमा पाइयो । यदि यो खबर सत्य हो भनें यस म’हामारीबाट बच्न बिश्वजगतको जनस्वास्थका लागि नै चीनको यो सर्वाधिक ठूलो देन हुनेछ ।
त्यसैगारी चीनले ४८ घण्टामै बनायो को’रोना भा’इर’सका विरामीको उपचार गर्ने सुविधासम्पन्‍न अस्पताल। चीनले दुई दिनमै को’रोना भा’इरसको उपचारका लागि एक हजार शैय्याको आपत्तकालिन अस्पताल निर्माण गरेर उपचार थालेको छ।चीनको बुहान क्षेत्रमा मा’हामा’रीको रुपमा को’रोना भा’इरस फैलिएपछि उसले को’रोना भाइ’रसका बिरामीलाई उपचार गर्ने हजार शय्याको अस्पताल मंगलबार रातिदेखि सञ्‍चालनमा ल्याइएको डेली मेलले उल्लेख गरेको छ। यसअघि चीनले गत बिहीबार १० दिनमा नयाँ अस्पताल नि’र्माण गर्ने घोष’णा गरेको थियो।
मेलका अनुसार एकदिनमै भवन ठड्याइएको र कामदार तथा स्वयंसेवकहरुले निरन्तर ४८ घण्टा खटिएर सुविधा सम्पन्‍न अस्पतालमा रुपान्तरण गरेको जनाइएको छ। यता, चिनियाँ अधिकारीहरुले सात दिनमा अस्पताल निर्माण गरेको रेकर्ड भए पनि यसपटक ६ दिनमै सक्ने प्रतिब’द्धता व्यक्त गरेका थिए भने नयाँ अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीहरुका लागि विशेष उपचार गर्ने बताइएको थियो।
नेपालले चीनबाट नेपालीहरूकाे उद्दारका लागि यसरी शुरू गर्दै…
क्वारेन्टाइनमा राख्न लगिएका एक व्यक्ति नदीमा बेपत्ता
चीनले अमेरिकालाई युद्धको धम्की दिएपछि फैलियो यस्तो सनसनी
०७८ बैशाख ०५ गते आइतबार, हेर्नुहाेस राशि अनुसार तपाईंहरूको भाग्यफल यस्तो छ...